musha > Iyo Yakanyanya Nootropic Supplement yeAlf GPC muna 2021
Mune maonero edu, yakanakisa nootropic yekuwedzera ye Alpha GPC muna 2021 yekushandisa wega ndiyo Cofttek Alpha GPC. Chinhu chakanakisa nezve ichi chekuwedzera ndechekuti ndeyezvinomera / vegan chigadzirwa uye nekudaro, munhu wese anogona kuzvitora. Kunyanya kukosha, iyo yekuwedzera haina chero gorosi, gluten, dairy, zai, hove, uye nzungu. Izvo, saka, zvakare inokodzera kudyiwa kwevanhu vane allergies. Nekudaro, kana iwe uine chero mamiriro ezvinhu aripo, iwe unofanirwa kutaura nachiremba wako kutanga. Izvi kuwedzera yakaunganidza ongororo dzakanaka chete uye inoita chaizvo zvazvinoti inoita.
Chii chakanakira Alpha GPC?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti Alpha GPC ishande?
Alpha GPC inoita kuti unete here?
Arfa uropi hune mhedzisiro here?
Unogona here kutora Alpha GPC uye CDP choline pamwechete?
Iko Alpha GPC yakasikwa here?
Arfa uropi hwakachengeteka here?
Migumisiro yeAlfa uropi inogara kwenguva yakareba sei?
Arfa brain inoshanda zvechokwadi here?
Joe Rogan ane yake Alpha brain?
Arifa uropi zviri pamutemo here?
Ndeipi yakanakisa Nootropic yekuwedzera?
Ndeupi akanakisa ekuwedzera huropi?
Alpha GPC inowedzera HGH here?
Ko choline inokonzeresa kuora mwoyo here?
Chii chine Alpha uropi?
CDP choline yakachengeteka here?
Ndeipi mhedzisiro yeNoopept?
Alpha GPC inowedzera dopamine here?
Alpha GPC inoshanda nekukurumidza sei?
Ndezvipi zviratidzo zvekushomeka kwech choline?
Ko choline yakanaka pakunetseka here?
Ndeipi sosi yakanaka kwazvo ye choline?
Ndingaite sei kuti ndiwane choline zvakasikwa?
Unoedza sei kushaya kukwana kwecholine?
Chii chinonzi Alpha GPC kuravira senge?
Ko choline inowedzera zvinobudirira here?
Citicoline yakafanana necholine here?
Citicoline inowedzera dopamine here?
Ndeupi musiyano uripo pakati pe choline uye phosphatidylcholine?
Ko choline inokonzera kunetseka here?
Choline inowedzera serotonin here?
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro ye choline?
Ko choline inokupa simba here?
Lecithin yakanaka kune kushushikana here?
Ndeapi mhedzisiro yeAlpha GPC?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti ishande Alph GPC kushanda?
Iko Alpha GPC mvura kana mafuta yakasviba?
Arfa uropi hwakachengeteka kushandisa here?
Ko huropi hunowedzera basa here?
Ko Nootropics inogona kukonzera kutemwa nemusoro here?
Zvakawanda zvakawandisa choline zvinogona kukuvadza here?
Unogona here kutora Alpha GPC mazuva ese?
Ko Nootropics yakachengeteka here?
Ndeipi yakanakisa piritsi rehuropi pamusika?
Kofi iri Nootropic here?
Ndeapi maNootropics anoshanda chaizvo?
CBD iri Nootropic here?
Ndeapi mabhenefiti eAlpha GPC?
Alpha GPC manejimendi anowedzera kuburitswa kweiyo neurotransmitter acetylcholine uye inofambisa kudzidza nekurangarira. Mumitambo, Alpha GPC yekuwedzera inodzivirira kudzikisira-kunokonzeresa kudzikiswa muzvikamu zve choline, inowedzera kutsungirira kuita uye kukura kwehomoni secretion.
Alpha GPC inoshanda pakuwedzera kuderera kwemauto emagetsi mushure memazuva matanhatu ekuwedzera. Sport performance makochi anogona kufunga kuwedzera Alfa GPC kuchikafu chekumhanya uye simba vatambi kusimudzira mashandiro.
Izvo zvinoita kuti iwe uwedzere kuneta usiku, asi izvi zvine musoro nekuda kweiyo yepamusoro mhando basa iro pfungwa dzako dzakaita masikati. Uye zvechokwadi, iwe unofanirwa kurara kuti pfungwa dzako dzigadzirise zvizere ndangariro dzawakaita zuva rese.
Iyo mhedzisiro mhedzisiro yeAlpha Brain ishoma kwazvo. Kubva paAlpha Brain kliniki kuyedzwa uye humbowo, hapana chirevo pamusoro pemhedzisiro yekukanganisa kwekuwedzera.
Aya maviri choline anowedzera anoshanda mushe pamwe chete. … Alpha GPC inogadzirwa nephosphatidylcholine (PC). Uye yekuwedzera CDP Choline inopa iyo uridine inodikanwa yePC synthesis. Saka zvakatorwa pamwechete, iwe unopa huropi hwako nerudzi rwecholine iyo inoda pasi chaipo pasero renhare.
Alpha GPC mamorekuru anowanzoitika anogara mukati mehuropi. Ichi chikafu chakakosha, chakabatana zvakanyanya nemhuri yeB-Vitamin, inogara mukati mecell membrane membrane.
Alpha Brain ndeimwe yakachengeteka nootropic zvinowedzera. Nekudaro, iwe unogona kusangana nezvimwe zvidiki mhedzisiro maererano nekudyidzana kwemushonga kana pakushandisa zvakanyanya kupfuura zvinodiwa. Ndicho chikonzero iwe uchifanira kunamatira kune yakakurudzirwa dosi uye unofanira kubvunza chiremba wako usati watora chero nootropic supplement.
Alpha Brain inotora anopfuura maawa matanhatu. Zvinoenderana nedzimwe ongororo dzakazvimirira paAlpha Brain, mhedzisiro yacho inogona kugara anopfuura maawa manomwe kusvika masere.
Iko kushandiswa kweAlfa huropi kwemavhiki matanhatu-kwakanyatso kuvandudza achangopfuura mazwi echirangaridzo nehutungamiriri basa kana ichienzaniswa neanodzora, muboka revakuru vane hutano vane makore 6-18. Mhedzisiro yemuyedzo uyu inokodzera kuenderera mberi nekudzidza kune kunzwisiswa kwekuziva kwekuwedzera zvokuwedzera mumitambo yemitambo.
Joe Rogan akabatana nekambani inonzi Onnit, iyo inogadzira Alpha Brain, chigadzirwa chinoreva kuvandudza kutaura kwekutaura uye kupedzisa basa. Alpha Brain zvakare ndeimwe yezvishoma zvigadzirwa pamusika izvo zvine kliniki miedzo uye Rogan anotenda kuti zvinomubatsira kuyeuka mazwi nemitsara zvirinani pane placebo.
Achitaura nezvemamiriro ezvinhu aya, muvambi weOnit Aubrey Marcus akati: “Tinogona kutaura pasina mubvunzo kuti hapana maamphetamine kana zvimwe zvinhu zvakarambidzwa muuropi hwaAlfa. Isu tinoedza nesarudzo batch yega yeAlfa huropi nemubhadharo wedu pachedu kuona kuti zvigadzirwa zvedu hazvina kana chinhu chakarambidzwa kana zvisiri pamutemo.
Alpha GPC ndeye yakasarudzika-iripo choline komputa inowanikwa muuropi. Ichi chigadzirwa chinoburitswawo apo fatty acid inowanikwa musoy nezvimwe zvirimwa inoputsika. Kunyangwe iyo Alpha GPC iripo zvakasikwa, mune yayo yakasarudzika kusangana uye huwandu, hazvina kukwana kuita mabasa ayo akagadzirirwa kutsigira. Saka, Alpha GPC inowanzo gadzirirwa kudyiwa nenzira yezvokudya zvinowedzera izvo zvine Alpha GPC inogadzirwa kuburikidza nekemikari kana enzymatic deacylation ye phosphatidylcholine-yakafumiswa soya phospholipids.
Tsvagiridzo yakaitwa paAlfa GPC mumakore apfuura yakazvisimbisa separasympathomimetic acetylcholine precursor iyo inosimudzira iyo parasympathetic nervous system uye nekudaro, inoshingairira kubatsira nekurapa kweAlzheimer's uye akasiyana mafomati eundangariro. Alpha GPC ndiyo zvakare inoshanda zvakanyanya choline prodrug uye nekudaro, zvinowedzerana zvine ichi chikamu chinoshanda sosi yekudya choline. Choline chinhu chinovaka muviri chakakosha icho muviri unoda kuita akawanda akakosha mabasa, senge kukura kwemaseru uye metabolism. Alpha GPC iri zvakare inoshanda nootropic iyo inowedzera iyo yehuropi yekuziva basa. Izvo zvinowanzo gadzirirwa kune vakwegura varwere vane ruzivo rwekuderera. Alpha GPC kudya kunogona zvakare kuwedzera kugadzirwa kwehormone yekukura mukati memuviri uye nekudaro, vatambi vakatenderedza basa vanoshandisa Alpha GPC zvinowedzeredza kusimudzira yavo yakazara simba kuburitsa.
Alpha GPC zvinowedzera zvinounza pamwe navo akati wandei mabhenefiti. Kutanga, Alpha GPC inozivikanwa kuvandudza hutano hwehuropi uye mashandiro. Izvo zvinoita saizvozvo nekuwedzera dopamine mazinga nemuviri. Tsvakurudzo dzinoverengeka dzakabatanidzawo mukomboni iyi nekuvandudza ndangariro basa uye kugona kudzidza. Mune zvimwe zviitiko, alpha GPC zvinowedzera zvakakwanisa kudzoreredza ndangariro kunyangwe zviitiko zvakadaro zviri kure uye zvishoma. Kunze kwekuvandudza huropi nekuziva mashandiro, pane humbowo hwakakwana kuratidza kuti Alpha GPC inogona kushandiswa kurapa Alzheimer's, dzakasiyana nzira dzekushushikana, uye kurwisa kwechischemic kurwisa. Iyo komputa inoshandiswawo nevatambi sezvo ichisimudzira kwavo kuita kuburitsa. Mukupedzisa, alpha GPC ine akati wandei mabhenefiti, chinhu chakakosha chakawedzera mukuzivikanwa kwayo mumakore achangopfuura.
Alpha GPC is a putative acetylcholine precursor iyo inogona kuwedzera kukura kwehomoni secretion kuburikidza nekuita kweacetylcholine-yakasimudzira catecholamine.
Isu hatina kuwana hukama hwakakosha mune inoenderana kuongororwa kwehukama pakati peplasma choline uye zviratidzo zvekuora mwoyo. Mune ino yakakura huwandu hwevanhu-hwakavakirwa, choline kuwanda kwakashata kwakabatanidzwa nezviratidzo zvekushushikana asi kwete nezviratidzo zvekushushikana.
Alpha Brain ine zvinhu zviviri zvinowedzera acetylcholine mazinga: GPC choline, iyo iyo muviri inoshandura kuita acetylcholine, uye Huperzine A, alkaloid inotorwa kubva kuChinese kirabhu moss, inozivikanwawo seHuperzia serrata.
CDP choline imushonga wakachengeteka, sekuratidzwa kwedzidzo ine chepfu; haina mhedzisiro yakakomba pane cholinergic system uye inoregererwa zvakakwana.
Zvinogona kuitika mhedzisiro ye noopept yaisanganisira kukanganiswa kwekurara (varwere ve5 / 31), kusagadzikana (3/31), uye kuwedzerwa kweropa (7/31) (Neznamov uye Teleshova, 2009). Maitiro ekuita kubva kutsvagurudzo yekuongorora Imwe ongororo mumakonzo yakashuma kuti noopept yakayambuka iyo brain brain barriers.
Zvinogona kuve zvinokwanisika kuti Alpha GPC iwedzere kugadzirisa ndangariro uye kusimudzira kugona kudzidza. Alpha GPC inogona zvakare kusimudza mwero wedopamine, iyo inobatsira uropi kushanda zvakanyanya.
Kunzwa kushushikana kana kusagadzikana.
Chiropa chakakora, neimwe nzira inozivikanwa seisiri-chidhakwa chakakora chiropa chirwere (NAFLD)
Hemorrhagic itsvo necrosis.
Choline inogona kusimudzira ndangariro mashandiro, kunatsiridza kukura kwehuropi uye kurapa kunetseka uye kumwe kusagadzikana kwepfungwa.
Kudya kwakapfuma sosi ye choline inyama, hove, dairy, uye mazai. Michero yakawanda, miriwo, uye zviyo zvakazara zvine choline futi, saka pane zvakawanda zvingasarudzwe zvevanhu vari pazvirimwa zvezvirimwa kana zvekudyara.
Multivitamini haigare iine choline.
Kunyangwe chikafu chakazara mu choline - chiropa, mazai emazai, uye nyama tsvuku - inowanzo kuve yakakwira mumafuta akazara, choline inogona kuwanikwawo muzvikafu zvakaderera mumafuta akazara anosanganisira salmon, cod, tilapia, zamu rehuku, uye nyemba.
Parizvino, hapana chekupedzisira kiriniki bvunzo iyo inogona kushandiswa kuzivisa vanhu vane choline inoshaya. Plasma choline, betaine, uye phosphatidylcholine kuwanda kwakaderera muvanhu vakadyiswa chikafu chisina kukwana, asi ivo mapani mushure mekudonha 30% -50%.
Iyo ine inotapira inotapira pairi iyo inogona kungoonekwa nemusvinu. Icho hachisi chaicho chinotsiva shuga kune wese munhu.
Zvidzidzo zvakakura zvekucherechedza zvinobatanidza choline kudya uye huwandu hweropa kunatsiridza huropi mashandiro, kusanganisira zvirinani ndangariro uye kugadzirisa. Kuwedzera ne 1,000 mg pazuva rakatungamira mukuvandudzwa kwepfupi- uye kwenguva refu-ndangariro yekutaura muvanhu vakuru vane makore makumi mashanu- kusvika makumi masere neshanu vaive nemurangariro wakashata.
Citicoline ndiro zita remubatanidzwa iro remakemikari akafanana necytidine-diphosphocholine (CDP choline). Musiyano chete ndewekuti CDP choline inowanzoitika muvanhu, uye citicoline ndiyo fomu inowanikwa mune zvekuwedzera zvinovaka muviri.
Citicoline inowedzera kutaurirana kwemaseru nekuwedzera kuwanikwa kwemaurotransmitters, anosanganisira acetylcholine, norepinephrine, uye dopamine. Mumashoko akareruka, iyo choline chikamu che citicoline inoshandiswa kugadzira acetylcholine, inova yekutanga Executive neurotransmitter muhuropi hwemunhu.
Phosphatidylcholine kemikari iri mumazai, soya, mustard, sunflower, uye zvimwe zvekudya. Izwi rekuti "phosphatidylcholine" dzimwe nguva rinoshandiswa zvakasiyana ne "lecithin," kunyangwe hazvo iwo maviri akasiyana. Choline chikamu chephosphatidylcholine, chinova chikamu chelecithin.
Mune ino yakakura huwandu hwevanhu-kudzidza, choline kuwanda kwaive kwakashata kwakabatana nezviratidzo zvekushushikana asi kwete nezviratidzo zvekushushikana.
Shanduko muzvikamu zveplasma ye choline kana yemamwe amino acids inotungamira mukuchinja kwehuropi huwandu hweanotangira aya maurotransmitter-choline yeacetylcholine, tryptophan yeserotonin, uye tyrosine yemakatekolamine.
munhuwi wehove wehove.
Zvinonzi choline inoita basa rakakosha mukusanganisa kwemafuta; inopwanya mafuta pasi kuti ishandiswe sosi yesimba. Ichi chiito che choline chinoita kuti ive yakakosha mukudzivirira mamiriro akaita seakakora chiropa kana kuwandisa mafuta muropa.
Inogona kukonzeresa mhedzisiro mune vamwe vanhu kusanganisira kupisa moyo, kutemwa nemusoro, dzungu, uye kuputika kweganda. Paunopihwa sepfuti: Alpha GPC iri POSSIBLY SAFE painoshandiswa nenzira kwayo. Inogona kukonzera mhedzisiro mune vamwe vanhu kusanganisira kupisa moyo, kurwadziwa nemusoro, kushaya hope, kuvhiringidzika, uye kutsvuka panzvimbo yejekiseni.
Mafomu akajairika mune chikafu ndeye phosphatidylcholine (PC), phosphocholine, alpha-gpc, sphingomyelin, CDP-choline, uye yakasununguka choline. Phospholine, yemahara choline, uye alpha-gpc inogadziriswa nemvura, nepo phosphatidylcholine uye sphingomyelin zvine mafuta-akanyungudika.
Alpha Brain ndeimwe yakachengeteka nootropic zvinowedzera. Nekudaro, iwe unogona kusangana nemimwe mhedzisiro mhedzisiro maererano nekubatana kwemishonga kana kana uchidya zvinopfuura zvinodiwa. Ndokusaka iwe uchifanira kunamatira kune yakakurudzirwa dosi uye unofanirwa kubvunza nachiremba wako usati watora chero nootropic yekuwedzera.
Izvo zvese zvidzidzo zvakaitw a kuongorora dzakasiyana mhedzisiro yeAlf GPC pane akasiyana emuviri mashandiro anobvumirana kuti dhata, painopedzwa mukati memazuva ese miganhu, yakachengeteka zvachose. Nekudaro, kunyanyisa kunwa kweAlpha GPC kunogona kutungamira nemhedzisiro, yakadai sekushungurudza musoro, kushaya hope, kushaya hope uye kutiza. Zvinotonyanya kukosha, vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa havafanirwe kudya chiumbwa ichi sezvo pasina chidzidzo chakaitwa kusvika zvino kudzidza zvakaitwa neAlpha GPC pane vakadzi vane pamuviri. Saizvozvo, kana iwe uine pre-huripo mamiriro, zviri nani kubvunza chiremba wako usati watanga neAlpha GPC yekuwedzera.
Asi kune zvimwe zvinogona kuve nemhedzisiro, kusanganisira kutemwa nemusoro, kushushikana uye kushaya hope.
Kana ikatorwa pamadosi anokurudzirwa Alpha GPC inoregererwa zvakanaka Kune vanhu vakuru vazhinji huwandu hweyero inogamuchirwa hwakafara; muyero wekuwedzera wezuva nezuva we300-1200 mg, kana uchitorwa mune imwe kana miviri doses, yakachengeteka uye inoshanda.
Iko kusashandiswa zvakanaka kwe nootropics-chero chinhu chingashandure, kuvandudza, kana kuwedzera kugona kwekuziva, kunyanya kuburikidza nekukurudzira kana kuvharidzira kwevamwe maurotransmitter - zvinogona kuve zvine njodzi uye zvinokanganisa kuhuropi hwemunhu, uye vamwe vanhu vane nhoroondo yekushandisa pfungwa kana zvinhu. kusagadzikana kunogona.
Mumakore mashoma apfuura, vanhu vakatanga kutarisa zvakanyanya kumitumbi yavo. Nhaurirano yakakomberedza hutano hwehuropi yakawedzera zvakanyanya sezvo huropi hunoshanda senzvimbo yekudzora yemuviri wese uye chero kusashanda zvakanaka muuropi kunogona kutungamira mukukanganisa kwakakomba. Choline anoita basa rakakosha mukuchengetedza hutano hwehuropi uye kugadzirisa basa rehuropi. Nekudaro, akawanda ekudya anowedzera izvozvi anosanganisira macomputer anopa choline kumuviri. Imwe yekomboni yakadaro ndiAlpha GPC.
Kofi inoonekwa seanootropic nekuti ine caffeine. Caffeine inozivikanwa nootropic iyo inowedzera kuwedzera kusvinura uye manzwiro. Nootropics, inonziwo zvakanyanya "smart zvinodhaka" inobatsira kuvandudza mashandiro ekuziva, inowedzera ndangariro uye kuita kwehuropi.
Chidzidzo chakaitwa kuti unzwisise mhedzisiro ye alpha GPC pane simba rinobuda rakaratidza kuti muyero we600 mg unokonzera kuwedzera mukuvanda kwehormone yekukura. Nekudaro, muyero wakaenzana wealpha GPC unowanzo kuve uri pakati pe300 kusvika 600 mg uye vatambi vanorayirwa kunamatira kumuganhu wepamusoro.
Nekudaro, kana zvasvika pakurapa kudonha kwekuziva, angangoita zvese zvidzidzo zvakaongorora zvinoitika zveAlfa GPC pane yekuziva mashandisiro akashandisa muyero wakaenzana we1200 mg pazuva, wakakamurwa kuita matatu madhizaini e400 mg Iko kuderera kweiyi muyero weyero kunogona kunge kusingaite zvakafanana neiyo 1200 mg dosage pazuva. Nekudaro, varwere vanorwara neAlzheimer's, dementia, uye TIA vanowanzo kurairwa kunamatira kune iyo 1200mg / zuva dosi.
Nekuda kwehuwandu hwayo hwakawanda hwekuziva kwehutano mabhenefiti, CBD inoonekwa se nootropic. Vazhinji vatsvagiri vanofarira kugona kweCBD kubatsira nematambudziko epfungwa senge kushushikana, kushushikana, uye kushushikana.
① Inoshanda Mukurapa Chirwere cheAlzheimer
Kwemakore apfuura zvidzidzo zvakati wandei zvakaitiswa kudzidza kugona kwechikamu ichi kubatsira nekurapa kweAlzheimer's. Kumwe kuongorora kwakaratidza kuti Alpha GPC inowedzera mwero weacetylcholine muuropi. Acetylcholine inosanganisirwa neyakawedzera huropi mashandiro uye nekuvandudza kugona. Zvinotonyanya kukosha, kudzidza kwakaratidzawo kuti kune vanhu vane hypertension, Alpha GPC yakadzora kuzvimba kwakatenderedza tsinga dzeropa muuropi, zvichidaro zvichitungamira mukuvandudza kwehuropi.
Tsvagiridzo yakaratidzawo kuti varwere vane chirwere cheAlzheimer vanogona kubatsirwa nekutora 1200 mg yeAlpha GPC mazuva ese. Iyi muyero inokurudzirwa kwenguva yemwedzi mitatu kusvika kumitanhatu uye inovandudza zvakanyanya hunyanzvi hwekufunga hwevanhu vanotambura nechirwere ichi chinouraya.
② Inobatsira neKurapwa kweDementia
Vanhu vazhinji vanovhiringidzika pakati pekuora mwoyo neAlzheimers. Saka, zvakakosha kuti umise musiyano uripo pakati pezviviri zvekutanga. Dementia ishoko rakajairika rinoshandiswa kutsanangura kuderera kwepfungwa dzemunhu kusvika pakuderera kunotanga kukanganisa mabasa ezuva nezuva emunhu. Alzheimer's haisi dementia asi chimwe chirwere chiri chimwe chezvinyanya kukonzeresa kuora mwoyo.
Kwemakore, zvidzidzo zvinoverengeka zvakaitwa kuti zvidzidze zvinoitika zve alpha GPC kudya kwevarwere vane dementia. Imwe ongororo yakaratidza kuti alpha GPC yekunwa inodarika mwedzi mitanhatu yakavandudza kuziva uye kushanda mune varwere vane hunyoro kusvika kune mwero dementia. Zvimwechetezvo, kumwe kuongorora kwakabatanidza kugara kwese alpha GPC kushandiswa pamwe nekuvandudzwa kwekunzwisisa mune varwere vane dementia nechirwere checyproystem Mukupedzisa, vanhu vari kurwara nepfungwa vanokwanisa kubatsirwa zvakanyanya nekutora 1000 mg yeAlpha GPC pazuva dosage. Mune varwere vakadai, Alpha GPC yekudya inosanganiswa neakagadziriswa maitiro, manzwiro, uye kuziva.
③ Inoshandiswa Kurapa Nguva Ischemic Attacks
Inononoka ischemic kurwiswa (TIA) ipfupipande zvikamu zvetsitsi kusakwana, kazhinji kunokonzerwa nekuvhiringidza kune kugovera kweropa kuropi uye ziso. Kunonoka ischemic kurwiswa kazhinji kunoitika kwemaminitsi mashoma asi ivo vanoonekwa sevakatarisana nekurohwa. Chidzidzo chakaitwa kuti chidzidze mugumisiro weAlpha GPC pakurwara kwevarwere veTIA. Chidzidzo chacho chakaratidza kuti vanhu vakatora gumi nemaviri-mg maAlf GPC shoti zuva rega rega kwemazuva makumi maviri neshanu, ichiteverwa ne1200 mg / zuva reAlpha GPC (kuburikidza nematanho emuromo) kwemwedzi mitanhatu, yakaratidza hunyanzvi hwekufunga uye pamwe nekurerukirwa kuri nani kubva kuTIA .
④ Inoita Inoshanda Nootropic Supplement
Acetylcholine ndeyemanyowa makemikari anoshanda seanorotransmitter uye akakosha pakuyeuka nekudzidza mabasa. Alfa GPC inowedzera kemikari iyi mukati meuropi, zvichidaro zvichitungamira mukuvandudza ndangariro nekuziva. Nekudaro, alpha GPC inowanzo shandiswa sechinhu chakakosha mune nootropic yekudya yezvirongedzo.
⑤ Inovandudza Kuita Kwemitambo
Muvatambi, alpha GPC kudya kunosanganisirwa nekudzidzira-kwakadzikisa kuderedza mu choline. Zvinotonyanya kukosha, yakabatanawo nekuwedzera kukura kwehomoni kugadzirwa uye yakasimudzira kutsungirira kuita. Saka, varairidzi nevarairidzi vanowanzo kuraira vatambi kuti vatore alpha GPC kuti iwane kunatsiridza tsandanyama kuita.
(1). US National Library yeMishonga National Institute of Health, Gatti G, Barzaghi N, Acuto G, Abbiati G, Fossati T, Perucca E., 1992 Sep; 30 (9): 331-5.
(2). Doggrell SA & Evans S; Evans (Gumiguru 2003). "Kurapa kwekutadza kuora mwoyo pamwe neurotransmission modulation". Nyanzvi Pfungwa Kuongorora Zvinodhaka. 12 (10): 1633-1654.
(3). Parnetti, Lucilla; et al. (2007). "Cholinergic preursor mukurapa kwekukanganisa kwekuziva: Kusabudirira nzira kana kudiwa kwekuongororazve?". Zvinyorwa zveNeurological Sayenzi. 257 (1–2): 264–9.
(4). Rwendo rwekuongorora egt.
(5). Oleoylethanolamide (oea) -iye mashiripiti wand ehupenyu hwako.
(6). Anandamide vs cbd: ndeipi iri nani kune hutano hwako? Zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo!
(7). Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nicotinamide riboside chloride.
(8). Magnesium l-threonate inowedzera: mabhenefiti, muyero, uye mhedzisiro.
(9). Palmitoylethanolamide (pea): mabhenefiti, muyero, mashandisiro, kuwedzera.
(10). Wepamusoro 6 hutano hunobatsira hwe resveratrol zvinowedzera.
(11). Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora phosphatidylserine (ps).
(12). Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13). Iyo yakanakisa yekurwisa-kukwegura chinowedzera chenicotinamide mononucleotide (nmn).
Alpha-gpc zvirokwazvo imwe yeakanakisa nootropics kwandiri. Ini ndinoshandisa 150mg pamazuva andinoda kukurudzira huropi.
Zvandakanyanya kushamiswa nazvo kugona kwayo kusimudzira mashandiro emitambo uye kupora chaizvo. Semutambi webasketball, iri chaizvo PED yechokwadi. Iwe unonzwa zvakanyanya mukutonga kwemuviri wako uye mafambiro aunoita, iko kwakanaka kwemhasuru kufamba uye kubatana kunowedzerwa zvakanyanya.
Ini ndinongotora 300mg izvozvi. Yakatora kwemwedzi miviri yakatwasuka. Kwete kuora mwoyo. Ingori simba rekurovedza muviri.
Ndinotora 300mg mangwanani zuva nezuva. Ndaizozviwana ndave kuora mwoyo mushure memamwe mavhiki mumakore ekutanga mashoma, saka ndaitora zororo kwemazuva mashoma. Iye zvino pandinotora zororo ndodzoka kwairi, zvinondirova zvakanyanya uye ndinowana zviroto zvinoenderana kwehusiku kana maviri. Kwete kunyanya kurara. Haisi chinhu changu chandinoda. Yakagadzirisa nyaya yeupenyu hwese hwehutsi hwepfungwa kwandiri. Ini zvino ndanyatso tarisa uye ndakachenjerera munharaunda, uye ndine simba rakawanda remuviri. Ndinoona wese munhu anoti vanoora mwoyo nazvo - uye ndinobvuma kuti zvakare-zvakanyanya-choline kushushikana ndicho chinhu chakaipisisa pasirese uye kuchanyatsoparadza zuva rako. Saka kana paine munhu arikuverenga izvi uye achifunga kuzviedza, tanga padosi rakadzika kwazvo, pamwe chero rimwe zuva rimwe kana kupfuura, uye ramba uine ziso pamanzwiro auri kuita.
Kwandiri zvinoshanda zvikuru. Ini pachokwadi ndakanga ndisingatarisiri zvakawandisa asi nguva dzese pandinozvitora ndinonzwa kunyanya kufunga uye ndawedzera ndangariro.
Ini ndinodzidza zvakawanda saka mhedzisiro yanga ichinyatso kuonekera kwandiri. Ini ndinotora 150-300 mg.